Ukunakekela kukhompyutha yakho: unama ezishisayo wokugaya
processor Thermal siqukethe impahla kokuba okusezingeni eliphezulu conductivity ezishisayo, futhi ukhonza njengephayona umqhubi ukushisa ngesikhathi uxhumano okubi uhlelo ukupholisa nge processor chip.
Isisekelo thermopaste - abicah ketshezi nge izithasiselo ka oxides ngezinto ezihlukahlukene. embodiments Yalutho aqukethe zinc oxide. I unama ezishisayo Ungafaka ezibizayo esiliva oxide.
Ngaphandle thermopaste sifana nomuthi wokuxubha liquid noma ukhilimu, ngokuvamile umbala omhlophe noma ukukhanya-grey. Ngo okudayisa edayiswa amashubhu noma imijovo at 1-2 amagremu.
Ngokuhamba kwesikhathi zonke umnikazi ikhompyutha ubhekene nesimo lapho kuyadingeka esikhundleni unama ezishisayo ku CPU. Ngokuvamile, lesi simo landulelwa zimpawu ezilandelayo:
Kube eqinile umsindo fan uhlelo CPU indlu. Ngesikhathi kokuhlinzwa, "isisindo" kwezicelo kwandisa umsindo.
Uhlelo uqala "bese wehlisa ijubane" futhi "hang out."
Kwamanye onobuhle ikhompyutha, okweqile processor kuholela ukuvala shaqa futhi iqalise uhlelo.
Ngaphezu kwalokho, i-computer kumele ngezikhathi bahlanza kusuka izintuli nokungcola hhayi kuphela ngaphandle kodwa ngaphakathi. Kulokhu, ngaphandle kokulinda ukuba ukubukeka lezi zimpawu zingase futhi zibe ezishisayo nokunamathisela esikhundleni.
Ukunakekela kukhompyutha yakho, disassembly, yokuhlanza indawo izingxenye zokusebenza iyunithi uhlelo yenziwe lula efanayo unakekelwe ibhayisikili ezivamile. Ngakho-ke, esikhundleni nokunamathisela ezishisayo kungaba ekhaya ngezandla zabo. Lokhu kuzodinga ukufakwa kokumqoka kuphela, kakhulu unamathisele, igumbi ukukhanya Ngomzamo omncane nje.
namathisela Thermal kuya processor okuthengiswa cishe kunoma iyiphi esitolo ikhompyutha noma eminyangweni of izinto zasehhovisi. Ngenxa homeliness iphakethe on the counter kunzima ukuthola, ngakho kufanele uxhumane nomthengisi yakho.
kufanele ahlubule izingubo zakhe esakhiwe ngezinto ukuthi buthelela zikagesi ngaphambi disassembly unit uhlelo, njengoba kuyomelwe babe nabo processor. osenyameni Static kungabangela ukulimala chip. Kunconywa ukuba sihlale siseduze ibhethri noma amapayipi kohlelo bafudumale, futhi uthinte ukuwashintsha njalo, ukuthatha off kagesi, ngaphambi kuthathe wokugaya.
Iyunithi uhlelo kumele inqanyuliwe kunethiwekhi futhi kwamanye amadivayisi. Khona-ke, susa screw ukukhipha ikhava ukufinyelela i-cooler, okuyinto epholisa wokugaya.
Fan cooler ukunweba imikhondo. Bayobizwa inqanyuliwe umbadlana.
Uma nomkhiqizi inkampani processor yesihlanu, ukususa echibini ukushisa, kuzomele uvule bebheke ngezikulufo ezine obandayo. Ukuze AMD izilimi yanele ukuba ucindezele isiqhebezo futhi idonsele eceleni.
Ngemva kokukhipha ezipholile, ngesikhathi sawo aphansi kungatholakala grey noma ndaba emhlophe. Lona nokunamathisela ezishisayo CPU. Isendlalelo efanayo kungabonwa microchip.
Ukusebenzisa kwezicubu ezithambile noma usula kumelwe ususe nokunamathisela ubudala. Kubalulekile ukuthi ngesikhathi senqubo yokuhlanza, izinto zokwakha Lint futhi streaks. Sesipholisanjini fan ezipholile futhi kufanele kube mahhala kusuka izintuli nokungcola kushaywa ngokusebenzisa nge umoya onomfutho.
Isicelo processor thermopaste kwi ungqimba elincanyana senziwa, basakaza ngokulinganayo ebusweni. Kukhona izindlela eziningana isicelo, kodwa kakhulu kuyoba nguwe okwathi ngazo, ngemva kokufaka kurediyetha ku processor asihlali phakathi Bubbles emoyeni, futhi unamathisele ungqimba kuyoba esincane.
Ngokufaka le kuyabanda ndawo, ngeke kukusize ngalutho ukuzama, bazama ukufaka ukuphuma ngokweqile nokunamathisela ezishisayo. Lokhu kungaholela umonakalo umbadlana, noma CPU isokhethi uhlobo. Ngemuva yokuxhuma amandla supply fan contact, kuzomele uvule computer wasiqashisa ukusebenzisa isikhashana. Uma ivaliwe, kurediyetha efakwe kahle, futhi ungakwazi isikulufa isembozo iyunithi uhlelo esikhundleni.
Ukuze uqinisekise ngokuphelele ukuthi unama ezishisayo wokugaya washintsha qualitatively, kufanele ufake i-BIOS. CPU lokushisa kumele kungancipha kakhulu futhi 35-36 degrees Celsius.
Kuyini mike incazelo, izinhlobo kudivayisi, kanye nokubuyekeza
Kungani computer yami icishiwe ngesikhathi imidlalo: Izimbangela
Ikhono lokukhulumisana nabantu
Montenegro ngoJuni - ukukhetha ephelele ngamalanga wamaholideyi lokha iinkolo
"Albucidum" imithi. Yokusetshenziswa
Ukubhekana cap: bewumsebenzi esihle